Doorashada Somaliland: Gabar codkeeda dhiibaneysa, Nov 13, 2017.
HARGEYSA, Somaliland - Gudiga Doorashada Somaliland ayaa ka warbixiyay halka ay marayso tirinta codadkii doorashadii shalay, taasi oo lagu dooranayo Madaxweynaha 5-aad ee maamulkaasi.
Guddigu wuxuu sheegay in uu billowday maanta wajiga labaad ee tirinta cododka, laga soo dhiibtay lixda gobol ee Somaliland ka kooban tahay, inkastoo bariga gobolka Sanaag iyo qeybo kamid ah gobolka Sool.
Xafiisyada gudiga doorashada ee gobolllada iyo degmooyinka, ayaa sanaadiiqda cododka u gudbiyay xarunta dhexe ee Hargeysa, halkaasi oo ka socoto tirinta codadka ay kala heleen muhsraxiinta xisbiyada.
Gudiga ayaa xusay in Xisbi kasta uu ka joogo qof u tirinaya codadka laakiin uusan awood u lahayn inuu ogaado tirada codadka Musharaxiisa ka helay degmooyinka, taasi oo aad u adkaynaysa in la saadaaliyo qofka ku horeeyay doorashada.
Saraakiisha gudiga waxa kaloo tilmaameen in aad loo adkeeyay xogta doorashada, islamarkaana hawada laga saarey Internet-ka, si looga hortago in natiijo aan sax ahayn lagu jahwareeiyo bulshada.
Waxaa lagu wadaa in natiijada lagu dhawaaqo maalinta khamiista ah ee soo socota, waxaa dhici karta in cabashooyin hadii ay yimaadaan inta la saxayo ay daahin karaan natiijada.
Dad lagu qiyaasay 700,000 oo qof ayaa codadkooda dhiibtay shalay, iyagoo ka codeeyay 1,641 goobood oo dhigay qalab casri ah, oo aqoonsan kara indhaha qofka codbixiyaha ah, si looga hortago in labo meel ka codeeyo.
Saddex musharax oo kala ah Muuse Biixi, oo ka socda Kulmiye, Cabdiraxmaan Cirro oo u tartamaya Waddani iyo Feysal Cali Waraabe oo UCID u taagan, ayaa loolan ugu jira inay ku guuleystaan xilka Madaxweynaha Somaliland.
Warar hoose oo Warsidaha Garowe Online helay ayaa sheegaya in Musharaxiinta Muuse Biixi iyo Cabdiraxmaan Cirro ay aad isagu dhawyihiin codadkii la dhiibtay, waxaana adag in la saadaaliyo qofka guuleysan doono. Halkan ka akhri.